Enwere ike iji Facetime na Windows? Nhọrọ efu 5 | Nzukọ mkpanaka
Enwere ike iji Facetime na Windows? Nhọrọ efu 5
Edere Ferreno | | Mmemme
FaceTime bụ ngwa nke ọtụtụ n'ime unu maara nke ọma. Ọ bụ ngwa ịkpọ oku vidiyo nke etinyere na ngwaọrụ Apple, ma ndị na -eji iOS, iPadOS na macOS. Ekele dịrị ya, ị nwere ike ịkpọ ndị enyi gị, ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị oku vidiyo na -enweghị nsogbu ọ bụla, na nkata otu na otu.
FaceTime bụ aha a ma ama n'etiti ndị ọrụ Windows, n'ihi na ọtụtụ chọrọ inwe ike tinye ya na ngwaọrụ ha. O di nwute, ngwa a dị naanị na ngwaọrụ Apple, opekata mpe ugbu a (ntule adịla kemgbe maka atụmatụ enwere ike ịmalite ya na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ). Maka nke a, a manyere anyị ịchọ ụzọ ọzọ iji nwee ike ịkpọ oku vidiyo ndị a na Windows.
1 Nhọrọ ndị ọzọ na FaceTime na Windows
1.3 Nzuko Google
1.4 Facebook ozi
1.5 Ngalaba Microsoft
Nhọrọ ndị ọzọ na FaceTime na Windows
Ọtụtụ ndị ọrụ na Windows Ha chọrọ ka Apple wepụta ụdị FaceTime maka sistemụ arụmọrụ Microsoft. Achọpụtala ya ogologo oge site na ohere a, n'agbanyeghị na ruo ugbu a ọ nweghị ihe merenụ gbasara ya, yabụ na anyị amaghị n'ezie ma ụlọ ọrụ Cupertino nwere atụmatụ iwepụta ụdị a ma ọ bụ na ọ bụghị. N'ọnọdụ ọ bụla, taa anyị enweghị ike iji ngwa a na kọmpụta Windows anyị. Yabụ na a manyere anyị ịchọ ụzọ ọzọ iji mee oku vidiyo dị otú a na PC.
Ozi ọma n'okwu a bụ na enwere ụzọ ọzọ maka FaceTime maka Windows. Ekele dịrị ha, anyị ga -enwe ike nweta ọrụ anyị chọrọ karịa site na ngwa Apple, ya bụ, nwee ike ịkpọ oku vidiyo n'otu n'otu na otu. Enwere nhọrọ ole na ole n'ọhịa a nke anyị nwere ike ịkpọ oku vidiyo na kọmpụta Windows anyị na -enweghị nsogbu ọ bụla. Yabụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị FaceTime na PC gị, ị nwere ike iji ngwa na -emezu otu ụzọ ahụ maka ọrụ. Na mgbakwunye, n'ọnọdụ ụfọdụ ị ga -enwe ọbụna ọrụ ndị ọzọ dị.
Zoom abụrụla otu ngwa a na -eji zuru ụwa ọnụ n'ime afọ gara aga, n'ihi ọrịa na -efe efe. Ngwa a na -enye anyị ohere ịkpọ oku vidiyo, ma ndị mmadụ n'otu n'otu, na ụdị ngwaọrụ niile, gụnyere kọmpụta Windows. Ọ bụ ya mere ezigbo nhọrọ maka FaceTime maka Windows. Ngwa a enwekwala ọnụnọ dị ukwuu na ojiji nkeonwe yana na ụlọ ọrụ ma ọ bụ na agụmakwụkwọ, ka i wee nwee ike iji ya n'ọtụtụ ọnọdụ yana n'ụdị nzukọ ọ bụla, yana nnukwu ìgwè mmadụ.
Zoom dị mfe iji ma anyị nwere ike ibudata ya n'efu na Windows. Anyị nwere ike ịmepụta ụlọ nkata n'ime ya, ka o wee nwee ike iso ndị enyi, ndị ọrụ ibe ma ọ bụ ezinụlọ nwee mkparịta ụka otu. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na ndị ọzọ nwee mkparịta ụka ọ ga -ekwe omume. Ụzọ dị mma ịkpọ oku vidiyo na Windows PC gị n'oge ọ bụla, na -ejighị FaceTime. Na mgbakwunye, na oku ndị ahụ enwere nkata, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkekọrịta faịlụ ma ọ bụ dee ihe.
Ngwa a enwewo arụmụka ya maka nzuzo, bụ nke a katọrọ nke ukwuu, n'agbanyeghị na emezigharịrị nsogbu dị iche iche na ya. Ọ bụ ya mere na ọ ka bụ nnukwu ihe ọzọ na ngwa dị ka nke Apple, n'ihi na ọ na -enye anyị ọrụ ya. Karịsịa maka ojiji nkeonwe, ọ bụghị ihe kwesịrị ịkpata oke nsogbu, mana ọtụtụ ụlọ ọrụ na -ezere iji ya na ndị ọrụ ha, na -atụgharị na ngwa ndị ọzọ.
Otu n'ime ngwa ịkpọ oku na ngwa ịkpọ oku vidiyo kacha ewu ewu n'ụwa, nke nọ na ahịa kemgbe ọtụtụ afọ. Ọtụtụ ndị na -ahụ Skype dị ka ngwa mbụ mbụ n'ọhịa a, nke Microsoft nwe ugbu a. Ọnụnọ ya na -agbada agbada, mana ọ ka bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka FaceTime na Windows, dịka ọmụmaatụ. Ebe ebumnuche nke ngwa a bụ iji nye anyị ohere ịkpọ oku na oku vidiyo na ndị ọzọ sitere na PC anyị. Na mgbakwunye, enwere ike ibudata ya na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, ma na PC, mbadamba na ama.
Skype dị mfe iji ma anyị na -enye gị ohere ịkpọ oku olu na oku vidiyo, ihe ga -ekwe omume ma na nkata otu onye ma na nkata otu. Yabụ ị ga-enwe ike iji ya n'oge mkparịta ụka gị na ndị enyi, ezinụlọ ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị na-enweghị nsogbu ọ bụla. N'ime ọtụtụ afọ, etinyela ọtụtụ ọrụ na ngwa ahụ, dị ka ndepụta okwu dị ndụ (dị mma n'oge oke mkpọtụ ma ọ bụ maka ndị nwere nsogbu ịnụ ihe). Na mgbakwunye na inwe nkata iji dee ma ọ bụ zipu faịlụ na nkata ndị a.
Oku na oku vidiyo na Skype bụ n'efu mgbe niile, akụkụ ọzọ na -eme ka ojiji ya dị mma nke ukwuu. Naanị ihe ị ga -eme bụ ịmepụta akaụntụ ma ọ bụ jiri akaụntụ Microsoft gị (Outlook ma ọ bụ Hotmail) iji nweta ya. Ịnwere ike ịgbakwunye kọntaktị Windows ma ọ bụ chọọ ndị mmadụ na -eji email ma ọ bụ aha njirimara wee nwee ike ịmalite nkata ngwa ngwa.
Google nwekwara ọrụ ịkpọ oku vidiyo nke ya Nweta site na Windows dị ka ihe ọzọ maka FaceTime. Nzute Google bụ ọrụ dabere n'ụkpụrụ agụmakwụkwọ ma ọ bụ azụmaahịa, mana ọtụtụ mmadụ na -eji ịkpọ ndị enyi na ezinụlọ ha oku vidiyo. Ọrụ a na -enye gị ohere imepụta nzukọ otu, ebe onye ọ bụla nwere ike isonye. Onye mepụtara nzukọ a na -ekerịta njikọ n'etiti ndị ọzọ, ka ha nwee ike nweta nzukọ ma ọ bụ nkata.
Ị ga -achọ naanị akaụntụ Google (Gmail) iji nweta ọrụ a, yabụ na ọ bụ nhọrọ a na -enwetakarị oge niile. Ọdịiche ahụ enweghị nsogbu yana ọrụ Google a na -enyekwa ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, site na nkọwa okwu ndụ, ruo n'ike ịdekọ nzukọ, nkata iziga ederede ma ọ bụ faịlụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Yabụ n'ihe gbasara ọrụ, ọ bụ ezigbo ihe ọzọ maka FaceTime na Windows, nke bara uru ịtụle.
Nzukọ Google nwere ụdịdị dị iche iche, mana ọnwa ole na ole, n'ihi ọrịa na -efe efe, A na -enye ohere ịnweta atụmatụ adịchaghị mkpa na -akwụghị ego. Versiondị adịchaghị mma bụ nke na -enye ọtụtụ ọrụ yana ebumnuche ya bụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ, dị ka gọọmentị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ. Ugbu a ị nwekwara ike iji ya n'efu, opekata mpe ọnwa ndị a, Google nwere ike machibido ohere a ọzọ n'ọdịnihu dị nso.
Nhọrọ a nwere ike iju ọtụtụ mmadụ anya, mana nke bụ eziokwu bụ na enwere ike iji Facebook Messenger dị ka ihe ọzọ maka FaceTime na Windows. Ọrụ ozi nke netwọkụ mmekọrịta na -enweta site na ihe nchọgharị na kọmputa anyị ma yabụ ọ ga -ekwe omume mee oku n'otu n'otu na oku vidiyo. Ọ bụ ụzọ ọzọ dị mma iji na -akpọtụrụ ndị enyi na ezinụlọ anyị oge niile.
Nhọrọ a bụ nke akwadoro maka ojiji nkeonwe. Ndị enyi anyị na Facebook na-abụkarị ezigbo enyi, ndị enyi, ndị ikwu na n'ọnọdụ ụfọdụ ndị ọrụ ibe. Mkparịta ụka dị na Messenger anaghị arụkarị ọrụ, ọ bụghị ngwa a na -eji maka ebumnuche a. Yabụ, ọ bụrụ na ị na -achọ ngwa ma ọ bụ ọrụ ka gị na ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ gị kpọọ oku na vidiyo, ọ bụ ezigbo nhọrọ ọzọ ịtụle na nke a.
The 9 kacha mma free video editọ enweghị a watermark
Dịka ihe ndị ọzọ dị na FaceTime na Windows, ọ bụ nhọrọ efu. Anyị ga -achọ naanị akaụntụ Facebook iji nweta ozi na Windows PC anyị. Yabụ na ọ ga -ekwe omume ịmalite ịkparịta ụka na ndị enyi na ezinụlọ n'ụzọ dị mfe na PC. Anyị nwekwara ike ịkpọ oku olu na oku vidiyo, na -eji kamera weebụ na kọmputa anyị. Iji nhọrọ a dị mfe, yabụ na ọ bụkwa ezigbo nhọrọ ịtụle maka nke ahụ.
N'ikpeazụ, anyị na -ahụ ihe ọzọ maka FaceTime maka Windows nke ahụ a na -etinyere ya nke ọma maka ọrụ ọkachamara. Ndị otu Microsoft bụ otu n'ime ngwa ndị ejirila kemgbe 2020, n'ihi ọrịa na -efe efe. N'ihi ngwa a, ị ga -enwe ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ibe gị, na -enwe ike ịmepụta otu, ime ụlọ na nzukọ na kọmputa gị n'ụzọ dị mfe, na -adabakwa na sistemụ arụmọrụ dị iche iche. Na ngwa a, a na -anabata oku ọnụnụ yana oku vidiyo. Agbanyeghị na a na -eji ya na ngalaba ọkachamara, ọ bụkwa ụzọ dị mma ka gị na ndị enyi na ezinụlọ gị na -akpakọrịta.
Oku vidiyo na Otu Microsoft nwere ike bụrụ otu ma ọ bụ n'otu, site na nkwado maka nnukwu otu, nke ihe karịrị mmadụ 100, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụ ya mere ngwa a ji bụrụ ihe kacha ewu ewu na ụlọ ọrụ, otu ma ọ bụ ebe agụmakwụkwọ, n'ihi na ọ na -enye ohere izute nnukwu ìgwè mmadụ. Na mgbakwunye, enwere nkata ebe ị nwere ike dee ozi, kekọrịta njikọ ma ọ bụ zipu faịlụ nye ndị ọzọ na -esonye na oku vidiyo ma ọ bụ nzukọ n'oge ahụ.
Ndị otu Microsoft na -agụnye a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ na oku gị na oku vidiyo. Site na ndepụta okwu dị ndụ, ruo na ịdekọ ha na ikwe ka nbudata ha na -esote, enwere ike iwepụta nchịkọta oku ndị a, ma ọ bụ enwere ike imechi ndị mmadụ mgbe a na -akpọ oku, ka naanị otu onye nwee ike ikwu okwu na -enweghị nkwụsị, dịka ọmụmaatụ. Ọtụtụ ọrụ ya na -eme ka ọ bụrụ otu ngwaọrụ ama ama na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ kemgbe afọ gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Enwere ike iji Facetime na Windows? Nhọrọ efu 5
Nweta ihe bara nnukwu uru na ngwụcha Castle: ọ ga -ekwe omume?
Mmemme kachasị mma iji mee montages na kọmpụta n'efu